Muxuu ka yiri Messi kaddib kaarkii casaanka ahaa uu qaatay inta lagu gudi jiray kulankii xalay ee Chile? – Gool FM
Kahor kulanka Deportivo Alaves, Zidane oo ka hadlay xaalada dhaawac ee Eden Hazard
“Waxaan ka shaqeyneynaa sidii aan u cusbooneysiin laheyn heshiiska Pogba” – Solskjær oo farriin u diray kooxda Real Madrid
Wakiilka Kevin De Bruyne oo shaaca ka qaaday haddii ciyaaryahankan khadka dhexe uu ka tagayo Kooxda Manchester City
Horudhac: Aston Villa vs Manchester United… (Mason Greenwood & Anthony Martial oo caawa goolal u baahan si ay rikoorro u gaaraan)
Hoos u dhaca ku yimid Real Madrid oo Man United ku dhiirrigelinaya inay sameyso heshiis weyn
Juventus oo qorsheeneysa in Man City iyo Barcelona ay ku garaacdo saxiixa mid ka mid ah xiddigaha ugu shidan Premier League
Kaddib Leroy Sané, Pep Guardiola oo si maldahan u sheegay bixitaanka xiddig kale ee ka tirsan Manchester City
Muxuu ka yiri Cristiano Ronaldo guuldarradii xalay ay kala kulmeen kooxda AC Milan??
Muxuu ka yiri Messi kaddib kaarkii casaanka ahaa uu qaatay inta lagu gudi jiray kulankii xalay ee Chile?
Dajiye July 7, 2019
(Brazil) 07 Luulyo 2019. Kabtanka xulka qaranka Argantina ee Lionel Messi ayaa si care leh kaga hadlay kaarkii casaanka ama roosaha uu qaatay inta lagu gudi jiray kulankii xalay ee Chile.
Xulka qaranka Argentina ayaa xalay ku guuleystay kulankii kaalinta saddexaad ee Copa America 2019, kaddib markii ay 2-1 kaga adkaadeen Chile, xilli Lionel Messi uu guddoomay kaarka guduudan.
Hadaba shabakada (TyC Sports) ayaa soo xigatay wareysi uu Lionel Messi bixiyay ciyaarta kaddib waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waxay arinta ku dhamaan laheyd kaarka digniinta ama Jaalaha ah aniga iyo ciyaaryahanka kale, laakiin waxay noqon kartaa inay sabab u tahay hadaladii aan sheegay kaddib kulankii lasoo dhaafay ee Sabtidii, balse waxaa muhiim ah in xulka uu si fiican kaga dhameystay tartankan”.
“Had iyo jeer waxaan sheegaa xaqiiqda, taasoo iga dhigeysa inaan noqdo mid degen oo raali ah, hadii wixii aan sheegay ay saameyn leedahay, aniga waxba igama galin, had iyo jeer waxaan si daacad ah u sheegee waxa aan ku hadlayo”.
“Waxaan seegay guusha kulankii kaalinta saddexaad ee Copa America 2019, sababtoo ah waxa ka dhacay tarankan waxay ahaayeen ixtiraam daro, mana doonayo inaan noqdo qeyb ka mid ah”.
“Waxaan si tartiib ah uga tagi doonaa tartanka, anigoo madaxayga aan kor u qaadayo, kuna faanayo kooxdan ee soo bandhigtay wax walba, waxaan rajeenayaa inay heli doonaan ixtiraam, waxay heystaan wax badan si ay u soo bandhigaan, maanta waxaan dhalinay goolal, taas ayaana kooxda ka dhigtay inay u ciyaaraan si ka duwan sidii hore”.
Kulamada caawa la ciyaari doono wareega 16-ka Koobka Qarammada Afrika, final Copa America iyo final Koobka Adduunka Dumarka 2019, & saacadaha ay soo galayaan
Kaddib markii Messi xalay garoonka laga saaray, waa kuwee LIXDA ciyaaryahan ee aan kaarka cas loo taagin xirfaddooda ciyaareed?